Wasiirka Awqaafta oo kormeeray goobaha ay degayaan xujeyda Soomaaliyeed | Faafan News
Wasiirka Awqaafta oo kormeeray goobaha ay degayaan xujeyda Soomaaliyeed
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Iimaan C/laahi Cali iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Sacuudiga ayaa kormeeray qeybo ka mid ah goobaha loogu tala galay in xujeyda Soomaaliyeed ay ka degaan magaalada Maka Al-mukarama.
Degaanada Wasiirka iyo wafdigiisa ay booqdeen ayaa loogu tala galay in ay degaan in ka badan Afar Kun oo ka tirsan xujeyda Soomaaliyeed, ee ka qeyb galeysan sanadkan xajka.
Dr. Iimaan C/laahi Cali Wasiirka Awqaafta ayaa si aad ah u soo dhaweeyay goobaha loogu tala galay xujeyda, halkaasi oo ah goobo u dhow Masjidka xaramka barakeysan ee magaalada Maka Al-mukarama.
Sidoo kale Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa booqashooda waxa ay ugu kuurgalayeen qaabka ay u socanayaan taabagelinta adeegyada xujeyda Soomaaliyeed sida degaanada, Gaadiidka, Rugaha Caafimaadka iyo wixii la mid ah.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxaa booqashada ku wehlinayay Danjiraha Soomaaliya ee dalka Sacuudiga Sheekh Daahir Maxamuud Geelle iyo xubno ka tirsan qunsuliyadda iyo safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Sacuudiga.
Xujeyda Soomaaliyeed ayaa maalmaha soo aadan waxaa la filayaa in ay gaaraan magaalooyinka barakeysan ee Maka Al-mukarama iyo Madiina Al-munawara.